ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ နဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ခေးလု (ခေါ်) လုလုအောင်! – Shwe Sar
ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ နဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ခေးလု (ခေါ်) လုလုအောင်!
မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ မိန်းကလေး တိုင်းအားကျရတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားနို င်ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေအနေ နဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူး လျက်ရှိနေကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက် တင်ပေးလေ့ရှိသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုး နဲ့ ခေးလုကြီးလို့ ခေါ်နေကြ တဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ လူမှု ကွန်ယက်ထက် ကို သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ မတင်တာကြာပြီဖြစ်ပြီး လွမ်းနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အထာကျကျလေးလန်းနေတဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ​ချပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။
သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေ တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို ကြွေစေ ခဲ့ပြီး အချစ်တွေလည်း ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ် လုလုအောင် ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပြန်လည်ေ ဖ်ာပြပေး လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။
မျောဒယျ လုလုအောငျကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှု ကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး အောငျမွငျလကျြ ရှိနတေဲ့ မျောဒယျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျခငျဗြ။ မိနျးကလေး တိုငျးအားကရြတဲ့ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ရရှိ ပိုငျဆိုငျထားနို ငျခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ အနုပညာ အလုပျတှအေနေ နဲ့ ကွျောငွာတှကေို ရိုကျကူး လကျြရှိနကော ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျထကျ တငျပေးလရှေိ့သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျခငျဗြ။
ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုး နဲ့ ခေးလုကွီးလို့ ချေါနကွေ တဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ လူမှု ကှနျယကျထကျ ကို သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ မတငျတာကွာပွီဖွဈပွီး လှမျးနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ အထာကကြလြေးလနျးနတေဲ့ အမိုကျစားပုံစံလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိလှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ ကို ခပြွလာခဲ့ပါတယျခငျဗြ။
သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေ တဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို ကွှစေေ ခဲ့ပွီး အခဈြတှလေညျး ပိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျဗြ။ ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ မျောဒယျ လုလုအောငျ ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျး တဲ့ အပွုံးလေးတှနေဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ ကို ပွနျလညျေ ဖျာပွပေး လိုကျရပါတယျခငျဗြ။
Previous post ရင်ခုန်စရာ အိုက်တင် မျိုးစုံဖြင့် ဆက်စီ ကျကျ လုပ်ပြလိုက်တဲ့ “နန်းမွေ့စံ”
Next post ရေချိုးကန် ထဲမှာ အပန်းဖြေအနား ယူနေ တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး ရဲ့ အမိုက်စားဗွီဒီယို